Yini i-Web Design esabelayo? I-RWD
ULwesibili, April 28, 2020 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 27, 2021 Douglas Karr
Kuthathwe iminyaka eyishumi ukwakhiwa kwewebhu okuphendulayo (RWD) ukusabalala kusukela lapho UCameron Adams uqale ukwethulwa umqondo. Umbono wawubuhlakani - kungani singenakukwazi ukuklama amasayithi ajwayelene nokubukwa kwensiza ebukwa kuyo?
Uyini Umklamo Ophendulayo?
Idizayini yeWebhu ephendulayo (i-RWD) iyindlela yokwakhiwa kwewebhu ehlose ukwakha amasayithi ukunikela ngesipiliyoni esihle sokubuka - ukufunda okulula nokuzulazula okunobukhulu obuncane bokushintsha usayizi, ukukhulisa, nokuskrola kuwo wonke amadivayisi (kusuka kumaselula kuye kukhompyutha yedeskithophu abaqaphi). Isayithi elenzelwe i-RWD liguqulela ukwakheka endaweni ebukelwayo ngokusebenzisa uketshezi, igridi esekwe ngokulingana, izithombe eziguquguqukayo, kanye nemibuzo yabezindaba ye-CSS3, isandiso somthetho we @media.
Ngamanye amagama, izinto ezinjengezithombe zingalungiswa kanye nokuhlelwa kwalezo zinto. Nayi ividiyo echaza ukuthi uyini umklamo ophendulayo nokuthi kungani inkampani yakho kufanele iwusebenzise. Sisanda kuvuselela kabusha i- DK New Media isayithi ukuthi liphendule futhi manje selisebenza Martech Zone ukwenza okufanayo!
Indlela yokwakha isayithi ephendulayo iyisidina njengoba udinga ukuba nobukhosi kwizitayela zakho ezihlelwe ngokuya ngosayizi wembobo yokubuka.
Iziphequluli ziyazazi ngosayizi wazo, ngakho-ke zilayisha ishidi lesitayela ukusuka phezulu kuye phansi, zibuza izitayela ezisebenzayo zosayizi wesikrini. Lokhu akusho ukuthi kufanele udizayine amashidi wesitayela ahlukile kusikrini ngasinye sosayizi, udinga nje ukuguqula izinto ezidingekayo.
Ukusebenza ngomqondo wokuqala ongomahamba nendlwana kuyisisekelo esiyisisekelo namuhla. Ama-brand asezingeni eliphakeme kakhulu awacabangi nje ngokuthi ngabe isayithi labo liyasebenziseka yini ngomakhalekhukhwini kodwa mayelana nesipiliyoni esigcwele samakhasimende.
ULucinda Duncalfe, Isikhulu Esiphezulu seMonetate
Nayi i-infographic evela kuMonetate ekhombisa izinzuzo ezingaba khona zokwakha idizayini eyodwa ephendulayo yamadivayisi amaningi:
Uma ungathanda ukubona isiza esiphendulayo sisebenza, khomba eyakho i-Google Chrome browser (ngikholwa ukuthi iFirefox inesici esifanayo) ku DK New Media. Manje khetha Buka> Unjiniyela> Amathuluzi Wonjiniyela kusuka kumenyu. Lokhu kuzolayisha inqwaba yamathuluzi ezansi kwesiphequluli. Chofoza kusithonjana esincane seselula ngakwesokunxele kakhulu kubha yemenyu yamathuluzi wonjiniyela.
Ungasebenzisa izinketho zokuzulazula phezulu ukuze ushintshe ukubuka kusuka ekubukekeni kwezwe kuye ekumeni ngobude, noma ukhethe noma iyiphi inombolo yosayizi bendawo yokubuka ehlelwe ngaphambilini. Kungadingeka ukuthi uphinde ulayishe ikhasi, kepha yilona thuluzi elipholile kunawo wonke emhlabeni lokuqinisekisa izilungiselelo zakho zokuphendula nokuqinisekisa ukuthi isayithi lakho libukeka lilihle kuwo wonke amadivayisi!
Tags: UCameron adamsividiyo echazayoiwebhusayithi ephendulayo yeselulaumklamo ophendulayoi-infographic design ephendulayoinfographic ephendulayoumklamo weselula ophendulayoukwakhiwa kwewebhu okuphendulayorwdyini ukwakheka okuphendulayoyini ukwakhiwa kwewebhu okuphendulayoyini i-rwd
May 31, 2015 ku-1: 13 PM
Idizayini yeWebhu ayisekho ukukhetha kwama-webmasters, manje sekuyimpoqo kubo. Siyabonga ngokwabelana ngalokhu okuthunyelwe okufundisayo.
UJun 2, 2021 ngo-6: 04 AM
Ngiyabonga kakhulu uDouglas ngale ndatshana echazwe kahle. Kufanele ngivumelane nalokhu noma ngasohlangothini lokuqukethwe lwezinto. Ezingxenyeni eziningi zamasayithi senza ukwakheka okuphendulayo ngeke kwanele. Sidinga okuqukethwe okuphendulayo. Kepha kumawebhusayithi ayisisekelo ngokuqinisekile sizosebenzisa i-athikili yakho ebhalwe kahle yokuthi ungakusingatha kanjani lokhu!
Jun 2, 2021 ku-12: 42 PM
Ngicabanga ukuthi uqinisile impela, Aaron. Akwanele ukukhulisa usayizi futhi uhambise izinto… nathi sidinga ukukusebenzisa kahle okuqukethwe.